ROG Phone3မှာ ဘာတွေထူးခြားသွားပြီလဲ?
2020 က သွေးအေးတယ်လို့ ဆိုရပေမယ့် စမတ်ဖုန်းတွေက တမျိုးပြီးတမျိုး မရိုးရအောင် ထွက်ရှိနေဆဲပါ။ အခုလည်း ROG Phone3ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်သလို ဒီနွံ ၊ ဒီတော ထဲက ရုန်းမထွက်သေးတဲ့ စမတ်ဖုန်း Trend ကို ပြောင်းလဲထားပြီလား လေ့လာကြည့်တာပေါ့။
Gaming Centric ဖုန်းတွေရဲ့ ပဓာန (Pride) က စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းတဲ့ SoC ၊ Premium ဆန်တဲ့ Display မျိုး တပ်ဆင်ထားမယ့်အစား Response Time ကောင်းမွန်ပြီး ချောမွေ့ တိကျတဲ့ Gaming Panel ကို ဦးစားပေးကြတယ်။
ဒုတိယ Focus ထားကြတာ Cooling Solution ပဲ ဖြစ်ပြီး Monstrous Specs နဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ ROG Phone3က Powerful အဖြစ်ဆုံး ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ပြောရင်ကောင်းမလား?
အရင်ဆုံး Component တွေကပဲ စကားစရရင် ပထမဦးဆုံး Snapdragon 865+ သုံးထားတဲ့ Android ဖုန်းဖြစ်လာသလို 3.09GHz အမြင့်ဆုံး Speed နဲ့ Run နိုင်ပါတယ်။
What’s more with ROG Phone 3
865 နဲ့ ယှဥ်ရင် Overclocked Version က GPU စွမ်းဆောင်ရည်မှာ 10% ပိုမို မြန်ဆန်ပြီး Snapdragon 865 အသုံးပြုထားတဲ့ မော်ဒယ်ကို ROG Phone3Strix Edition အနေနဲ့ ရရှိနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
Plus အလုံးမှာတော့ Wi-Fi 6E Standard ပါရှိမှာဖြစ်ပြီး 5G ချိတ်ဆက်မှုအတွက် Bandwidth ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး Latency နည်းပါးတဲ့6GHz Band ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။
High-end Component ချည်း သုံးထားတာနည်းတူ 12GB LPDDR5 RAM ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး 16GB အများဆုံး ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
Storage ပိုင်းအတွက် UFS 3.1 အမျိုးစား 128GB ကနေ 512GB အထိ တိုးချဲ့နိုင်ပြီး Strix မော်ဒယ်မှာ 8GB RAM နဲ့ 128GB (သို့) 256GB Storage Option နှစ်မျိုး ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
Display ပိုင်းအနေနဲ့ 6.6” AMOLED အသုံးပြုပေးထားပြီး ROG Phone3ရဲ့ Pride တစ်ခုက 144Hz Refresh Rate ပါဝင်တဲ့အချက်ပါ။
အခုအနေထားလောက်ဆိုရင် ဂိမ်းမင်းဖုန်းတစ်လုံးအတွက် လုံလောက်သွားပြီလို့ ဆိုနိုင်သလို တဖက်မှာလည်း Unity ရဲ့ Partner ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ASUS အဆိုရ 144Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့တဲ့ ဂိမ်း အမျိုး (၁၀၀) ကျော် ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Panel ပိုင်း အားသာချက်တွေက 120Hz ၊ 90Hz စသဖြင့် Setting မှာ ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Auto Mode ကတော့ အသုံးပြုနေတဲ့ အနေထားလိုက် Variable Refresh Rate ကို ပြောင်းလဲပေးမှာပါ။
Quality ပိုင်းအနေနဲ့ 25ms Touch Latency ၊ 270Hz Touch Sampling Rate ရှိပါတယ်။ ဒီ Respond Rate နဲ့ Sensing Rate ဟာ Android ဖုန်းတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောနိုင်သလို Visual ကောင်းမွန်နေစေဖို့ HDR10+ ကို ထောက်ပံ့ထားတယ်။
Colour Accuracy အတွက် DCI-P3 113% ပေးစွမ်းထားသလို ASUS အဆိုရ DeltaE < 1 Absolute Colour ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဂိမ်းမင်းဖုန်းလို့ ဆိုသော်ငြား Display နဲ့တင် Impress ဖြစ်စရာပါ။
ကင်မရာပိုင်း အနေနဲ့လည်း အဆင့်မြင့်တင်ပေးထားသလို Primary Sensor အနေနဲ့ Sony IMX686 64MP တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ Sensor ဟာ Lossless 2x Magnification ထောက်ပံ့ထားပြီး 16MP Quality နဲ့ ရရှိမှာပါ။
ဒါ့အပြင် 8K ဗီဒီယိုကို 30fps နှုန်း ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပြီး 4K ကို 120fps နှုန်းနဲ့ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ Stability ပိုင်းအတွက် HyperSteady Video နဲ့ Wind Filter ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Secondary ကင်မရာ အနေနဲ့ 13MP Ultra-wide သုံးပေးထားပြီး 125 Degree မြင်ကွင်းကျယ် ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။
ယခင်က Dual Camera Setup ပဲ သုံးခဲ့ပေမယ့် 5MP Macro Lens Assist ပါဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ Primary Sensor လည်း ပိုကောင်းလာတဲ့အတွက် ဂိမ်းမင်းဖုန်းတစ်လုံးကို ဂိမ်းဆော့ဖို့ပဲ သုံးတာထက် All-in-one Device အနေနဲ့ပါ ဖန်တီးပေးထားတယ် ဆိုရမှာပါ။
Selfie အတွက်ကိုတော့ 24MP Sensor တပ်ဆင်ပေးထားပြီး Feature ပိုင်း ထူးခြားလာတဲ့အချက်က Ultrasonic AirTrigger Sensor ပါ။
အဆိုပါ Sensor ဟာ Pressure Sensing Rate ပေါ်မူတည်ပြီး အထိုက်လျောက် တုံ့ပြန်နိုင်သလို စမတ်ဖုန်းရဲ့ Edge Boundaries ကို Controller ပုံစံအနေနဲ့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာပါ။
Along with various functionality
ဒီ Approach က Black Shark2နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ဆိုပေမယ့် ROG ဖုန်းအသစ်မှာ Control Customization ထည့်ပေးထားပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Swipe Gesture လုပ်ဆောင်ချက်မှာ Secondary Command နဲ့ Dual-partition Button တွေကို AirTriggers နေရာမှာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်လို mimics လုပ်နိုင်မလဲဆိုရင် Controller ရဲ့ L1/L2 ၊ R1/R2 Physical ခလုတ်တွေလို အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။
အဆိုပါ Swipe Gesture အပြင် Motion Control လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းကို Shake လုပ်ရုံနဲ့ အလိုလျောက် Weapon Reload လုပ်တာမျိုးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အခုလို Motion Tracker အပြင် ROG Phone3မှာ ဘေးနှစ်ဖက် Bezels ပါဝင်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ASUS အနေနဲ့ အခုလို ပြောထားပါတယ်။
ပထမအချက်က လက်ဖဝါးနဲ့ ဖုန်းဘေးနှစ်ဖက် မျက်နှာပြင် ထိမိတာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို Audio ပိုင်းအတွက် Front-facing Speaker နှစ်လုံး ဘေးတစ်ဖက်တချက်မှာ ထည့်ထားဖို့ လုံလုံလောက်လောက် နေရာရသွားတာပါ
ဒိအတွက် AudioWizard ကိုလည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေအောင် Dirac Sound ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ROG Headset တွေနဲ့ အသုံးပြုတဲ့အခါ Audio Presets ထည့်ပေးထားပြီး Equalizer Function နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
စမတ်ဖုန်းမှာ Audio Jack Port မပါဝင်ပေမယ့် AeroActive Cooler ကတဆင့် ချိတ်ဆက် နားဆင်နိုင်သလို USB Connection ကတဆင့် Audio Output အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Battery အတွက် 6,000mAh Capacity ထည့်ပေးထားပြီး 30W Fast Charging စနစ်ပါဝင်တယ်။
45 မိနစ်အတွင်းမှာ 4,500mAh Capacity အားပြန်သွင်းပေးနိုင်ပြီး Battery သက်တမ်း တာရှည်ခံဖို့အတွက် ASUS Software ကနေ ထောက်ပံ့ထားတာ မျိုးလည်းရှိပါတယ်။
တစ်ခါက ဘက်ထရီ ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြဖူးသလို စမတ်ဖုန်း အများစုက Initial State မှာ Voltage များများနဲ့ အားသွင်းပေးပေမယ့် Level တစ်ခု ဆိုကြပါစို့ 70% ၊ 80% နဲ့ 90% ရောက်တဲ့အခါ Voltage ရော Current ရော လျှော့ပေးတတ်ကြပါတယ်။
ဒိနိယာမ သဘောတရားက ဘက်ထရီ မထိခိုက်စေဖို့ လိုအပ်သလို ASUS အနေနဲ့ Control လုပ်ပေးထားတာက 70% ကျော်သွားတဲ့အခါ 15W ၊ 10W Speed စသဖြင့် Voltage Current ကို လျှော့ပေးလိုက်မှာပါ။
ဒါကြောင့် အပူကြောင့် သက်တမ်းလျော့တာကို အထိုက်လျောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ပျမ်းမျှအားဖြင့် 400 Cycles အထက် သုံးနိုင်မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်တိုင်က Battery Serious သမားဆိုရင် Charging Interval (40% သို့ 60%) ပမာဏ လောက်ပဲ အားသွင်းတာမျိုး ကန့်သတ်နိုင်သလို Fast Charging Speed ကိုလည်း 10W နှုန်းနဲ့ ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Accessories ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စုံလင်လှသလို ဖြုတ်နိုင်၊ တပ်နိုင်တဲ့ Kunai3Controller ပါဝင်မှာပါ။ အဆိုပါ Controller ကို Bumper Case တပ်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ ဘေးတစ်ဖက်ချက်မှာ တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
ဒါ့အပြင် Xbox Controller အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မယ့် Gaming Clip ထည့်ပေးထားသလို ပိုပြီး လိုက်ဖက်သွားအောင် TwinView Dock3ကိုပါ ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
Dock3မှာ 5.000mAh Battery ပါဝင်ပြီး ROG Phone3Display နည်းတူ 6.6” AMOLED Screen ၊ 144Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ Dock2နဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် 120Hz Refresh Rate နဲ့ပဲ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
ဒါ့အပြင် Dock3ကို Dual Screen ထောက်ပံ့တဲ့ ဂိမ်းတွေ ဆော့ကစားနိုင်သလို Chat Room အနေနဲ့ Secondary Screen အနေနဲ့ပါ သုံးနိုင်မှာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖော်ပြလိုတာက ရောင်းချသွားမယ့် စျေးနှုန်းဖြစ်ပြီး ROG Phone3(Plus) မော်ဒယ်ကို ယူရို 1,000 (ဒေါ်လာ 1,150) ဝန်းကျင် ၊ Strix Edition ကို ယူရို 800 (ဒေါ်လာ 927) တန်ဖိုးနဲ့ ရောင်းချသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ASUS အနေနဲ့ အဆိုပါ စမတ်ဖုန်းကို စက်တင်ဘာလမှာ ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ Black Shark3၊ Nubia Red Magic 5G နဲ့ Lenovo Legion Gaming ဖုန်းတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
အခုချိန်က ဆုံးဖြတ်ဖို့ စောနေသေးသလို ဂိမ်းမင်း စမတ်ဖုန်း Trend ကို ROG Phone3နဲ့ ASUS ပြောင်းလဲလိုက်ပြီလား? Specs တွေ တပြုံကြီး သုံးထားရုံနဲ့ ဂိမ်းမင်းဖုန်းလို့ ခေါ်ထိုက်နေပြီလား?
Reference: The Verge ၊ GSMArena ၊ ROG Phone3Homepage